Talata 30 Martsa 2021 – FJKM
Ny olona mila vonjy amin’ny Tompo
Isan’ny vavaka manokana ataon’ny mila vonjy amin’Andriamanitra ity Salamo ity . I Davida no voalaza ho nanao izany , ka rehefa miresaka hoe Davida dia ny fifandraisany tamin’Andriamanitra no zava-dehibe amin’izany , satria isan’ny olona tanteraka indrindra izy teo amin’izany fifandraisana tamin’Andriamanitra izany .
Koa ny olona mila vonjy amin’Andriamanitra dia
1-Voasedra aloha :
Heverin’ny maro angamba fa mandeha ho azy ny fitalahoana sy fangataham-bonjy amin’Andriamanitra nefa na dia be fitiavana sy be fahari-po tokoa aza Izy dia misy zavatra takiany amin’ny olona mila vonjy Aminy :
-Tokony tsy hisy fitaka aloha ny molotra , izany hoe : tsy mihatsaravelatsihy ka hafa no tenenin’ny molotra , nefa hafa no ataon’ny tànana na eritreretina .
-Nozahana toetra tamin’ny memy : ny volafotsy , ny volamena no ampandalovina amin’ny memy na afo mba hahafantarana azy ho tena izy fa tsy sandoka . I Davida eto dia miteny fa mampandalo zavatra sarotra ny olona koa Andriamanitra mba hahitana raha tena olon’Andriamanitra tokoa ny olona iray , izany hoe : maharitra eo amin’ny lalany , manaiky sy mino Azy , marina sy madio eo anatrehan’Andriamanitra .
Ny olona mila vonjy Aminy koa dia mialoka Aminy tanteraka , izany hoe: mialoka eo ambany elany , tahaka ny ataon’ny reniakoho amin’ny zanany , ka na dia mafy aza ny afitsoky ny fahavalo dia resy lahatra sy matoky ny fiarovany .
Rehefa misy zavatra manjo anao , aiza na iza no ilanao vonjy ?